Ukushisa kwe-induction kuyindlela ekhethwayo yokwenza lukhuni ama-camshafts. Inhloso yalolu hlelo lokusebenza ukwenza lukhuni amasampuli wensimbi ahlukahlukene kungakapheli imizuzwana eminingana.Uma ukufudumeza kokungeniswa kuhlanganiswe nolayini bokukhiqiza, i-camshaft ngayinye ingaba lukhuni ngokulawula okukhulu nokuphindeka. Imishini yethu ikuvumela ukuthi ulungise ngokuphelele imingcele yokushisa.
Izinsiza: Umshini wokuqina we-DW-UHF-20KW induction
isikhathi: 5 amasekhondi.
Ikhoyili: I-Helical induction heating coil.
Ama-Camshafts asetshenziswa kabanzi embonini yezimoto njengengxenye eyinhloko yezinjini zokuhamba. Ngenxa yobude bawo bonke kanye nejubane eliphakeme le-peripheral, baba nezingcindezi ezibucayi kanye nezimo ezibucayi ngesikhathi sokusebenza, ezinganciphisa kakhulu impilo yabo yokusebenza. Ukuthanda izinto ezibonakalayo kuthambisa ukunqoba lezi zingcindezi, okuthi noma kunjalo, kuphumele endaweni egqoke ngokweqile ngenxa yokushayisana phakathi kwama-camshaft nama-injini we-injini.
Inhloso yenqubo yokwenza lukhuni eyenziwe yanda ukuqina kokuqina kobuso bendawo yokusebenza, kuyilapho isisekelo sesampula sihlala sithambile ukugcina amandla ayo ashubile nokumelana ne-torsion. Ngale njongo, ingaphezulu komhlaba kufanele lishiswe ekushiseni okuthile (imvamisa kungaba ngu-800 ° C) kulandelwe ukupholisa okufanele. Amanani okushisa nokupholisa kufanele aqashelwe ngokuqinile ukuze kutholakale izici ezithile ezibonakalayo. Umgogodla we-camshaft kufanele uvikeleke ekufudumaleni ngesikhathi sokuqina ukuze ulondoloze ukuthamba kwawo.
Izinhlelo zokufudumeza kwe-DW-UHF ezisetshenziswa kabanzi embonini yezimoto.
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi amakhokho, camshafts lukhuni, lukhuni i-camshaft, lukhuni camshafts, lokungeniswa camshafts ukuqina, ukuqina kokungeniswa, lokungeniswa lukhuni camshafts, lokungenisa lokushisa camshafts Imeyili kwemikhumbi